Kusvirwa kwangu Maid nedhara rarasika room. Ndakaritricker!
Yakanga iri Sunday ini sa maid ndainge ndaswera ndiri pa off musi wacho. Muchinda wangu wandaimhanya naye akanditambisira zuva , murume mukuru kutadza kunditundisa asikana. Ndakamupa beche rese ndikati ita zvaunoda munhu kwava kungoti tofo tofo ototunda. Ndikat mashura angu andingamirire second round pamunhu akadai.
Now ava manheru ndiri kumba hangu already in my room ndichitoverenga ma stories aRetired Proffesor. I was addicted to sviro stories zvekuti ndaiva ndisingagoni kurara ndisina kumaverenga. Ndakaverenga ma stories kusvika beche rangu rati nyakata nekutota. Ndakaisa chi kristu paside kwava kupinza ruoko mupant ndokukwiza ka beans kangu within two minutes ndakatunda zvekut ndakaona nyeredzi mumba. I felt relieved but still beche rangu raida more. Maoko angu ega was not enough nxaaaaa but Paiva pasina yeku setter.
Pasina nguva ndarara ndakanzwa musuwo wangu kuvhurwa , ndainge ndisinga kiyi door rangu ini. The room was dark but nesvi light zvaibudikra mu passage ndakaona sa daddy , he was my boss. Vaidei mu room mangu panguva dzakadaro dzeusiku. Ndakanyepedzera kurara ndikanzwa musuwo wavharwa munhu ava kufamba achiuya kubed. This was new , mudhara vanenge vaiva varasika room yavo here.?
Ndakaramba ndakanyarara ndikanzwa munhu ava kufugura jira rangu opinda “sori mukadzi wangu ndanonoka kuuya but ndozvigadzirisa babe…” Shit dhara range rarasika room . ndakashaya kuti ndodiii ndomuudza kut marasika or ndongonyarara. Ndakanyarara ndikati rega tione mudhara anoita sei. Dhara rakaramba richizevezera ndokubva rasvebera pandiri rakuzevezera munzeve dzangu. Pakaita contact ye my naked body newedhara waivavo naked ndakanzwa magetsi muviri wese. Mudhara akabva atanga kundibata mazamu angu zviya zvemunhu akadhakwa. It was really nice zvekuti without thinking I shifted ndakutarisa mudenga nokutovhura makumbo ka one. Zvinoita zemo amana zvekuti moms was in another room handina kumbozvifunga. Ndaiva ndotoda mboro. It was like a prayer answered.
Mudhara achiona shifting dzandakaita rakabva razevezera futi ” sorry mukadzi wangu I love u…” He was abt to kiss me but smell yedoro yakandirova ndakatarisa kuside and he ended up kissing my cheek. Ndakabatwa mazamu kusvika mudhara ainda pamusoro pangu ndainge ndakatota kare zvekut I was already ready for sex but he didn’t fuck me. Dhara rakaenda kuzasi kwava kunotanga kudya beche rangu. Asikana imi it was my first time kudyiwa beche ndakatunda nekusura pasina ma seconds kkkkjk. Kusura pasviro hazvimakisi. Dhara rakaramba richidya matinji angu ini ndakabatira musoro waro , then he moved ndasara padiki kuti nditunde zvakare ndikanzwa dhara rava kufambisa mboro yaro pamatinji angu. Zimusoro racho raitonzwikwa kuti mboro ihombe iyi. Ndakadzikisa ruoko ndichibva ndaibata haaaa ndakapotsa ndatiza but nezemo randaiva naro ndakabva ndaibaira mubeche strait dhara richipedzisa kuipinza yese ndichibva ndangotunda zvakare. Baba vaiva nechipo chemboro ava. He positioned himself kwava kutanga kundisvira richikoira slowly semunhu asina kwaanomhanyira. ” nhasi wakachinja mukadzi wangu , beche rako riri tight wariiteiko babe…”
Dhara rakatanga kupomba ini ndichirova chikapa zvekuti dhara rainhuwa doro ndakazvikanganwa ndichibva ndatsvaka muromo wavo ndega for a kiss which was my mistake. The moment we kissed dhara ndokuunza ruoko kuzobata musoro wangu . .. Dhara raka freezer riri pamusoro pangu for few seconds but ndakaramba ndakaripina mu waist nema kumbo angu. Ini ndaiva ndine weave moms vaiva ne short hair saka dhara parakabata musoro wangu rakanzwa difference yacho kkkkk rikaziva kuti riri kusvira munhu asiye…
Ndotoona kuti ndava kuzviruza apa I whispered” pedzisai daddy matondisvira kare …” Ndokubva ndatotanga kurova chikapa ndiri pasi ipapo. Dhara rakabva rapika rakutanga kusvira manje kwete slowly yaranga richita pekutanga. Ndakasvirwa hama ndikatunda kasingaperi. Pandakaona dhara rakuitA sekuneta ndakarikutura ini ndava kuenda pamusoro. Pakuda kuigarira yese pakaitA makwikwi imi. Beche rakatadza kuimedza yese. But piece yakapinda iyoyo ndakanzwa getsi muviri wese kwakutanga kurova 50 magate ndiri pamusoro. Handingat hangu ndinongona but wese wandinogarira mboro yake haapedzi 5 minutes asina kutunda. Ndakakurunga dhara apa ndichitamba nemachende aro hama imi rume rakawomba nekunakirwa but harina kutunda inini ndini ndakatotunda rwechitatu.
Zvidhakwa hazvitunde zvekumhanya. Ndakabva pamusoro ndava kufongoreswa ndichibva ndarinzwa zi anaconda richivhura Nzira yematinji angu kuti ripinde asikana, rakapinda Mudhara kwakutanga kupomba. Ndakasvirwa imi , beche rakapisa ndakademba chandaiva ndazvitangira. Kusvirwa kwangu Maid nedhara rarasika room
Ndakazama kurova mastyles ESE kuti dhara ritunde but hazvina kushanda. Dhara rakazondiwisira pasi kwava kubaira mboro mumuromo mangu, ndaiziva zvazvaireva. Ndakaribata zimboro riya kwava kuridya sendinodya ice cream… Pasina two minutes without warning dhara rakagomera ndikanzwa mumuromo mese mazara ma sperms. Ndakapotsa ndarutsa but ndakazvishingisa kumedza ese kwava ku cleaner mboro yedhara. Takambozorora tiri pasi murima imomo, yaaaa ndainge ndasvirwa zvemhando yepamusoro.
Mudhara kissed me kwechinguva ndokubva rasimuka rava kupfeka. Apedza kupfeka hameno zvakaburitsiwa mupocket mavo vava kuisa pachi dressing table chaiva mumba mangu and he left without saying gud bye…
Nekudhakwa kwandainge ndaita nemboro ndakarara hope dzeumambo kwava kuzopeputswa ne alarm ya 4 am ndichigadzirira vana vechikoro. I checked on the dressing table ndikaona 50 bond iripo then a text in my fone yaiti ” thanks darling that was the best night of my life. We have to try it again another time…”
Asikana ndakusvirwa nedhara zvakasimba kunyanya ma Sunday ema off days angu aya ndava kutoinda kulodge nedhara kwatinosvirana pasina kutyira.
Handichamiriri mari yepay takudya tese namadam boss…
Kusvirwa kwangu Maid nedhara rarasika room appeared first on VanodaZvinhu
Updated: November 13, 2020 — 12:26 am
Tags: kuseducer dhara., kuseducer murume wa madam boss, kutsotsa mboro